Yintoni i-stagflation? | Ezezimali
UJoseph kwakhona | | Ezopolitiko, Ezopolitiko kwezoqoqosho
Ewe kunjalo, i-stagflation yenye yeefayile ze- ngokwezoqoqosho eziye zasebenza ngakumbi kule minyaka idlulileyo ngenxa yezizathu ekulula ukuziqonda. Kodwa ngaba uyazi ngokwenene ukuba eli gama libonakala linzima kangakanani lithetha ntoni? Ke ukuze ungathandabuzi ukusukela ngoku, kuya kufuneka uyazi ukuba i-stagflation ayisiyiyo enye into kwaye ayikho enye into engaphantsi kwemeko yezoqoqosho yelizwe elibonakaliswe Ukudodobala kwezoqoqosho ngelixa ukunyuka kwamaxabiso kunye nomvuzo kuqhubeka. Njengoko ubona kwangaphambili, yimeko ethe yafunyanwa eSpain amaxesha ngamaxesha, ngaphandle kokuya phambili.
I-Stagflation yenye yeemeko ezingathandekiyo, hayi kuqoqosho ngokubanzi, kodwa ikwabandakanya iimarike zokulingana. Kuba ihlala ineziphumo eziyingozi kubo bobabini, njengoko uza kubona kweli nqaku. Into ekufuneka ithathelwe ingqalelo kukuba i-stagflation ayisixabiso lentengo kwaye ngaphandle kokufana kwala magama mabini, azikho zandla zininzi. Yinto eyahlukileyo kwaye ukusuka kwindawo ethile yokujonga inzima ngakumbi kwaye iyingozi. Ayilolize, icandelo elilungileyo le- Ezopolitiko kwezoqoqosho kwihlabathi zenziwe ukuba zivelise le meko intekenteke.
Ngamanye amagama, i-stagflation ilingana nokunyuka kwamaxabiso kunye nokwehla okukhulu kwezoqoqosho. Ngokuqinisekileyo ngala magama uya kukuqonda ngcono ukuba eli gama libandakanya ntoni. Nangona kusenokwenzeka ukuba khange uve oko okwangoku. Kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba kuya kubaluleka kakhulu kuwe ukulawula iiasethi zakho zobuqu okanye nokuphuhlisa utyalo-mali lwakho. Zombini ngokubhekisele kwi izikhundla ezivulekileyo kwimarike yemasheya indlela yokuzivala. Kuxhomekeke kubunzulu be-stagflation, ukuba ivela kuqoqosho lwelizwe.
1 I-stagflation: iingozi zayo
2 Ngaba kulula ukuba yenzeke?
3 Iziphumo zokudodobala
4 Izibonelelo zestagflation
5 Iimpawu zale ntshukumo
I-stagflation: iingozi zayo
Eli nqanaba kuqoqosho ayizizo ezona ndaba zilungileyo umdla welizwe, nokuba yintoni. Ngenxa yezizathu ezininzi kodwa ngaphezulu kwako konke kulula kakhulu ukuyiqonda. Akunyanzelekanga ukuba ube yingcali enkulu kwezoqoqosho. Akunjalongo noko. Ngenxa yokuba i-stagflation iyingozi enkulu kubemi beliphi na ilizwe. Kwelinye icala, kuba bahlwempu abasebenzi kunye nexabiso lemali yabo lixabisa kancinci nangaphantsi. Ayilolize, ukwanda kweendleko zobomi kubabeka kwimeko elungele ngakumbi ixesha ngalinye. Ngobungozi abangakwaziyo ukuthatha iintlawulo ezithile abanazo ebomini babo.
Kwaye kwelinye icala, ngokungakhuli uqoqosho lwelizwe luvula uthotho lomngcipheko kubemi ngokwabo. Oko kukuthi, njengoko uqoqosho lukhula kancinci imisebenzi incinci kwaye ngenxa yale meko, ukusetyenziswa kwehliswa kancinci kancinci. Uqoqosho oluye lwabhaptizwa kumlo okhulayo ongalunganga. Ukuya kwinqanaba lokuba inokuvelisa imeko enesiqhushumbisi kwaye inokuboniswa kwinto eyenzekileyo kwihlabathi kwinkulungwane ephelileyo, xa kwavela uxinzelelo olukhulu. Eyona nto imbi kakhulu kwimeko enokuthi ivele kwimbonakalo ye-stagflation.
Ngaba kulula ukuba yenzeke?
Ngaphandle kwento abanokucinga ngayo abemi abaninzi, i-stagflation ayikho imeko engenakulindeleka kwilizwe. Kufuneka kukhunjulwe ukuba yile nto yenzekileyo eSpain kwiminyaka yokuqala yeengxaki zoqoqosho, malunga ne-2012 kunye ne-2013. iiprojekthi. Ngamafutshane, imeko enqwenelekayo kakhulu kuyo nayiphi na indawo yokujonga kunye nakwimbono yayo yonke imisinga yezoqoqosho. Zombini ezivela kwinkululeko nakwabangeneleli abaninzi. Kungenxa yokuba isisombululo ekuphela kwaso kukuphuma ku-stagflation ngaphezulu kweminye imiba yezoqoqosho. Kuba kusekupheleni kosuku ukuba kunjalo.
Enye yezona zinto zibalulekileyo kwi-stagflation yiyo Ukugqwetha into, hayi kuphela kuqoqosho lwesizwe. Endaweni yoko, ikwachaphazela ezopolitiko kunye nokuvela kwemikhosi evelayo enokubangela ukuba iimarike zamashishini ezingenanzala emisiweyo zihle ziye ezantsi nokuba zinamandla amakhulu, njengoko kwenzekile kwezi meko zibaluleke kakhulu. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba iimeko zokungafani zinokuvela kwaye ziphele zonakalisa ubomi babemi bemihla ngemihla. Le yinyani ebonakala ngokucacileyo xa ukuhla kwenqanaba lokoyikeka kuvela.
Ngoku kuyakufuneka ukuba kuqinisekiswe ukuba zeziphi ezona ziphumo zimbi zibangelwa yile ntshukumo yezoqoqosho. Kuba zininzi zendalo ezahlukeneyo, njengoko ubona kulo mzuzu kweli nqaku linomdla. Kuba ngokwenyani, ezi meko zilandelayo zinokwenzeka ukuba sikuveze apha ngezantsi.
Okokuqala, kukho into efanelekileyo njengoko ithathwa kwimeko yengqesho. Ngale ndlela, i-stagflation yenza i Ukunyuka kwamaxabiso Kuzo zonke iimpahla, ikakhulu ezivela ekusetyenzisweni.
El intswela-ngqesho iyanda kuwo onke amanqanaba ngenxa yokonyuka okuncinci ziinkampani. Kude kube kufikwa kumanqanaba aphezulu kule parameter yezoqoqosho yobukhulu bokuqala.
Iimarike ze-equity nazo ziyachaphazeleka yile ntshukumo kuba ixhaphake kakhulu yenza ukungazinzi kunye nokungazithembi kwiimarike. Konke oku kuguqulela ekubeni kwehle kakhulu kwimarike yemasheya kunye nokuhla kwexabiso okulandelayo kwixabiso lokhuseleko.
Ukwenza izigqibo, kokubini ngoorhulumente kunye neenkampani ngokwazo, kuba lukhulu intsonkothe ​​ngakumbi Ukuza kuthi ga ngoku. Ngokubhekisele kumanyathelo ekufuneka bewathathe njengexesha elifanelekileyo lokuzisebenzisa. Ngomngcipheko wokunyusa imeko yezoqoqosho.
Isavimbi iyabona ukuba incinci kangakanani imali yakho ixabisa ngaphantsi kwaye uneengxaki ezininzi zokwenza imali ngokufanelekileyo. Unamathandabuzo agqithisileyo malunga nalapho kufuneka ubeke khona ukuze ufumane inzala engaphezulu okanye engaphantsi eyamkelweyo yenzala.
Ngaphandle kwento umntu anokucinga ngayo, i-stagflation ikwazisa izinto ezintle kuphuhliso lwayo. Ayisiyonto yokuba ininzi, kodwa ubuncinci inokuba nesinye isibonelelo ekuyileni le parameter yezoqoqosho. Elinye lala matyala limelwe ngu Inkqubo yerhafu edla ngokuba nobubele ngakumbi, nangona le meko ingahlali isenzeka. Ngokukodwa, ukukhuthaza iinkampani ukuze zibe neziphumo ezingcono kwiiakhawunti zazo. Kwelinye icala, ukuncitshiswa kwerhafu yenye yezinto ezivelayo kule meko. Oko kukuthi, uya kuba nonyango olulunge ngakumbi kunokuba bekungekho stagflation.
Ngayiphi na imeko, ukubonakala kwayo akukaze kucetyiswe, kude nayo, kuba izithintelo zingaphezulu kakhulu kwezibonelelo. Ukusuka nakweyiphi na indawo yokujonga kwaye ngokubhekisele kuzo zombini iinkampani kunye nabemi ngokwabo, abonzakeleyo kwiminqweno yabo ukusuka kumzuzu wokuqala. Le yinto ecace gca kuzo zonke iingcali zezoqoqosho kwaye ngenxa yesi sizathu zonke izicwangciso nemigaqo-nkqubo yazo zinesona sizathu siphambili sokungaxami kwe-stagflation akufiki. Kungenxa yokuba ukuba ukunyuka kwamaxabiso kuyingozi ngenene, ewe, ukubambeka kuya kuba yingozi ngakumbi.
Iimpawu zale ntshukumo
Enye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka zithathelwe ingqalelo ukusukela ngoku ukuya phambili ukwazi ukuba yeyiphi i-stagflation ngala manqaku ayichazayo kwaye ngokuqinisekileyo aneendalo ezahlukileyo ezahlukileyo. Ezi, ke, ezinye zazo:
Ingozi yokuba uqoqosho ayikwazi ukukhula, kodwa ngokuchaseneyo amaxabiso ezinto kunye nayo yonke into ngokubanzi ukuba ziyakhula. Ngamanye amaxesha phantsi kobunzima obukhulu nobuyingozi.
La ukugqwetha Kwiimarike zemali kuyabonakala kwaye ngale ndlela abatyali zimali abancinci nabaphakathi bayachaphazeleka kakhulu yile meko yenzekileyo.
Ngokungathandabuzekiyo ikhokelela kwi ubuhlwempu, bobabini kunye nabemi. Omnye wemingcipheko emikhulu evela kwinkangeleko yayo nangaphezulu kwezinye izinto eziguquguqukayo kwezoqoqosho.
Enye yezona ziphumo zoyikekayo kukuba le nkqubo ihamba kunye nefayile ye- xabiso Kwezo zinto kuthengiswa imali yelinye ilizwe. Ngokulibaziseka okulandelayo kwimisebenzi yezoqoqosho.
Akunakulityalwa ukuba indibaniselwano yokunyuka kwamaxabiso kunye nokwehla kwezoqoqosho kunesiphumo esiphambili sokudodobala koqoqosho. Ngesi sizathu, umlo ongunaphakade ngokuchasene ne-stagflation ayothusi. Ngamaxesha amaninzi, nokuba ithatha ntoni, kuba kufuneka kuncitshiswe izinto ezinkulu kwinani labemi abachaphazelekayo kweli xesha loqoqosho. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuthetha ukuba yenye yezona meko zimbi ezinokuthi zifakelwe kuqoqosho lwelizwe kuba iziphumo zalo ngokuqinisekileyo zingayi kuba ntle, njengoko ulumkisile kweli nqaku. Ulawulo lwakho lungaphezulu kunangaphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Ezopolitiko kwezoqoqosho » Yintoni i-stagflation?